We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှန်ဂရီလာဟော်တယ်မှာတည်းခို နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှန်ဂရီလာဟော်တယ်မှာတည်းခို နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ထိုင်းအစိုးရက ကြယ်ငါးလုံးအဆင့်ရှိတဲ့ ရှန်ဂရီလာဟော်တယ်မှာ အထူးစီစဉ်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ သူမနဲ့ အတူ ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တဲ့ မစနာမင်း ( Sandar Min) လဲ ပါဝင်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဖက်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်စိုးသိန်းလာတယ်လို့ သိရတယ်။ သူက စက်မှု (၁) နဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်း ကတာဝန်ရှိသူ
ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှု ၁ ဆိုလို့ ဘာမှ အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့မီးစက်တောင် မလုပ်တတ်တဲ့ စက်မှု
(၁) ပါ။ အမျိုးသားစီမံကိန်းက နာမည်ကတော့ဟိန်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာတော့
မြန်မာအမျိုးသမီးအများစုဟာ ထမိန်တွေကြက်သွန်ခွံလို ပါးသထက်ပါးလာနေပါတယ်။
စိုးသိန်းကောင်းတာလေးတခုကတော့သူဗိုလ်မှုးဘ၀မှာ ဒေါ်စုတရားပွဲကိုအရပ်ဝတ်နဲ့ လာနားထောင်
လေ့ရှိတယ်လို့ ဓါတ်သိတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်စုကတော့ မနက်ဖန်မှာထိုင်းနိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ ဆုံမယ်လို့ သိရပါတယ်။
At least they deserve that. It is cheaper than Tay Za son spend on whore.